राष्ट्रिय – Page 20 – BIG FM 101.2 MHz
Home » राष्ट्रिय (page 20)
जापानमा मृत्यु भएका विद्यार्थीको अन्त्येष्टिका लागि सहयोगको अपिल
Ranjan Adhikari Chhetri राष्ट्रिय
रञ्जन अधिकारी पोखरा, २ जेठ / जापान पुगेको छोरोले केहि कमाउला, आर्थिक अवस्था सुधार्ला र सुखको दिन आउला भनेर सोचेका अर्जुन नेपालीका बुबाआमाको अब यस्तो दिन त आउँदैन नै । छोराको अन्तिम पटक मुख हेर्ने दिन समेत जुरेन । यही मे १४ मा जापानको चिवा केन इचिकावा सी स्थित आफ्नै कोठामा मृत भेटिएका उनको शव रकम अभावले नेपाल ल्याउन सम्भव नै …
मतगणना आजै शुरु हुने
Rem Bk राष्ट्रिय
बिग न्यूज पोखरा, ३१ बैशाख । एमालेको नमान्दा नमान्दै भएपनि निर्वाचन कार्यालयले मतदान सकिपछि मुचुल्का उठाएर मतगणना गर्ने तयारी थालेको छ । मतदान सकिएलगतै मुचुल्का गरेर मतपेटिका स्थानीय तहको केन्द्रमा लगिने र लगत्तै मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले मतगणनाका लागि ११ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । यद्यपी यो विषयमा नेकपा एमालेले अहिलेसम्म केहि प्रतिक्रिया …
राष्ट्रका लागि एक दिन दुःखकष्ट सहेर मतदान गर्नोस्ः निर्वाचन आयोग
३० बैशाख, काठमाठौं । स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले मतदानको अघिल्लो दिन पत्रकार सम्मेनन गरी ढुक्क भएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन मतदातालाई अपील गरेको छ । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का चार महानगर र एक उपमहानगरसहित २८३ स्थानीय तहमा भोलि निर्वाचन हुँदैछ । भोलि आइतबार मतदान विहान ७ बजेदेखि साँझ ५ …
भोट कसरी हाल्ने ? हेर्नुहोस् (भिडियो)
स्थानीय चुनावमा मत हाल्न आतुर छन्। बैसाख ३१ मा हुन लागेको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेदवारले भोट माग्नमा जति भोट कसरी हाल्नेबारे जानकारी दिने कुरामा ध्यान दिन सकेका छैनन्। आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि एनिमेटेड भिडियो बनाइ युट्युबमा समेत राखिसकेको छ। तर सो भिडियो हेर्नेको संख्या निकै कम छ। जबकी आगामी निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ५४ हजार …
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा नै आचारसंहिता विपरित चुनावी प्रचारमा, स्वास्थ्यचौकी र गाविस भवनमा सभा (फोटो फिचर)
बिग न्युज पोखरा, २७ बैशाख । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित कास्कीमा चुनावी सभा भएको छ । सो सभामा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा नै सामेल छन् । उनी नेपाली कांग्रेस कास्कीको चुनाव प्रचारमा केहि दिनदेखि सहभागी हुँदै आएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता विपरित सहभागी हुँदै थापाले भाषणमार्फत कांग्रेसलाई भोट माग्दै आएकोमा कास्कीकोटको सभा नै स्वास्थ्य चौकीमा आयोजना गरिएको छ । गाविस …
‘अवरोधको सामना गर्ने क्षमता न्यायपालिकासँग छ’ – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की
सुशीला कार्की प्रजातन्त्र र कानुनको शासन एक अर्काका परिपुरक अवधारणाहरु हुन्। सुसंस्कृति सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि कानुनको शासन र संविधानवादको अवधारणालाई व्यावहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्न वाञ्छनीय छ। प्रधानन्यायालय स्थापना सँगसँगै सुरु भएको हाम्रो यो यात्राका क्रममा विभिन्न आरोह र अवरोह देखा परे। संस्थागत जीवनमा आउने स्वाभाविक नियतीको अनुभव हामीले पनि भोगेका छौँ। यस्ता समस्त कुराहरुबाट थप उर्जा र …
जेठ १ बाट मतगणना गर्ने आयोगको तयारी, कहाँ कहाँ हुन्छ मतगणना ?
काठमाडौँ, २६ बैशाख । निर्वाचन आयोगले ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना १ जेठबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । मतदान सम्पन्न भएको दिन बेलुकासम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतपेटिका ल्याई १ जेठबाट गणना सुरु गर्ने आयोगले जनाएको छ । दुर्गम क्षेत्रका मतपेटिका आउन समय लाग्ने भएकाले हेलिकोप्टरमार्फत छिटोभन्दा छिटो ल्याएर गणना गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा …
३१६ जना निर्विरोध, एमाले सबैभन्दा अगाडि
वैशाख २३ / पहिलो चरणमा हुन गइरहेको प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २ सय ८३ गाउँपालिका/नगरपालिकाका विभिन्न पदमा ३ सय १६ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार केही स्थानमा वैशाख १९ गते भएको मनोनयन दर्ताकै दिन केही पद निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो । वैशाख २१ को उम्मेदवारी फिर्तापछि निर्विरोध हुनेको संख्या थपिएको हो …
८६ वर्षीय आरोही मीनबहादुर शेरचनको सगरमाथा आधार शिविरमा निधन
वैशाख २३ / विश्वकै पाका सगरमाथा आरोहीका रुपमा किर्तिमान राख्न सगरमाथा आधार शिविर पुगेका ८६ वर्षीय आरोही मीनबहादुर शेरचनको शनिबार निधन भएको छ। म्याग्दीको भुरुवा तातोपानीका बेलायती सेनामा समेत काम गरेका पूर्व गोर्ख सैनिक शेरचन वैशाख ३ गते आइतबार सात सदस्यीय टोलीसहित काठमाडौंबाट सगरमाथा आरोहणमा हिँडेका थिए । पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईका अनुसार शेरचनको आधार शिविरमा ५ बजेर १४ मिनेट …
फोटो पत्रकारिता अवार्ड कास्कीका पत्रकारत्रय रञ्जित, गुरुङ र बरालले जिते
पोखराका फोटो पत्रकार सुदर्शन रञ्जितले एनएफपिजे ग्रेस इन्टरनेसनल खेलकुद फोटो पत्रकारिता अवार्ड जितेका छन् । पाटन प्याथ ल्याव स्वतन्त्र फोटोपत्रकार राम गुरुङ (कास्की) र मेट्स एजुकेशन मोफशल फोटोपत्रकारिता अवार्ड कृष्णमणि बराल (अन्न्पूर्ण पोष्ट दैनीक –कास्की) ले जिते । राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपिजे) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘फोटो कनर्सन राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता अवार्ड २०७३’ अन्तर्गत कास्कीका तीन पत्रकारले अवार्ड जितेका हुन् । अवार्डसहित …
Page 20 of 196« First...10«1819202122 » 304050...Last »